Taariikhda horumarka ganacsiga - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
LACAG LA'AAN BILAASH OO KU SAABSAN DHAMMAAN SAACADAHA DHAQANKA
Taariikhda horumarka ganacsiga
Nooca Mareykan ah ee hose ku haya
Nooca Britishka ee hose garaaca
Nooc ka mid ah tuubooyinka Jarmalka
La socodka tayada
Sebtember 12-keedii, 2002, Waxaa la asaasay shirkada loo yaqaan Jinchaoyang Mold.
Sebtember 28th, 2016, shirkaddu waxay si rasmi ah isu beddelaysaa shirkad soosaarida soosaarida ku xeel dheer xirfad-soosaar ku-takhasusay.
Sanadkii 2017-kii, iyadoo ay ugu wacan tahay tayada waxsoosaarka aad u fiican, waxay dhiseysay xiriir iskaashi muddo dheer ah oo lala yeelanayo OEM-yada gudaha waana la aqoonsaday (tusaale: GM Waging, China FAW, BYD, Changan).
Sanadka 2018, waxay heshay xuquuqda dhoofinta madaxbannaan.
Sanadka 2019, in la abuuro iskaashi lala yeesho macaamiisha Bariga Dhexe, kuwaas oo ah Yurub iyo Mareykanka.
Sanadkii 2020-kii,Waxaan qorsheyneynaa inaan furi karno suuqyo dheeri ah oo gudaha ah iyo kuwo dibedda ah oo dheeri ah, oo aan si joogto ah u bilowno soo saar tayo sare leh oo tayo sare leh si aan u adkeynno booska ay ka taagan tahay wershadaha. Shirkaddu waxay maal gelisay 20% iibkeeda iyada oo ah lacag gaar ah oo loogu talagalay soosaarka otomaatiga. Waxaa la filayaa in tiro lamid ah shaqaalaha ay laban laabto wax soo saarka sanadka 2022.
Luulyo 1, 2020, si loo haqabtiro baahiyaha suuqa iyo istiraatiijiyadda shirkadda, shirkaddii asalka ahayd Tianjin Jinchaoyang hose clamp Co., Ltd. waxaa si rasmi ah loogu magacaabay Mika (Tianjin) Pipeline Technology Co., Ltd.